Fursado shaqo oo ka banaan golaha Aqalka sare | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Fursado shaqo oo ka banaan golaha Aqalka sare
Fursado shaqo oo ka banaan golaha Aqalka sare
April 20, 2017	31 Views
Muqdisho: Waxaan idin soo gudbinayaa shaqooyin ka banaan Golaha Aqalka Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Fadlan fiiri shuruudaha looga baahan yahay ilaa lix jago oo ah maamulka. Waxaa dhowaan la soo xayeysiin doonaa kuwa kale oo shaqaalaha Aqalka ka tirsan Insha Allah. Wixii faahin ah kala soco warbaahinta.
1- Xog-haya Guud ee Golaha:-
Shuruudaha looga baahan yahay
 Inuu Soomaali yahay, dhimirkiisu dhan yahay, aan danbe maxkamad xukuntey galin isla markaana da’diisa ka yareyn 30 sano
 Ugu yeraan shahaada 2aad ee jaamacada (master degree) oo la xiriirta sharciga ama maamulka iyo maareynta ama wax u dhigma.
 Inuu lee yahay ugu yeraan 7 sano oo khibrad shaqo ah oo la xiriirta howlaha maamulka.
 Inuu ku hadli karo islamarkaana qori karo ugu yeraan luuqadaha Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiiriska
 Inuu lee yahay aqoon uu si fiican ugu adeegsan karo aaladda Komputerka.
2- AGAASIMAHA ADEEGGA GUDDIYADA, GUDDONKA IYO HAB MAAMUUSKA:-
 Inuu Soomaali yahay, dhimirkiisu dhan yahay, aan dambi maxkamad xukuntey galin isla markaana da’diisa ka yareyn 25 sano
 Ugu yeraan shahaada 2aad ee jaamacada (master degree) oo la xiriirta maamulka iyo maareynta, maaliyadda, xisaabaadka ama wax u dhigma, sida; Political science, Law, Public administration, MBA iyo International relations…
 Inuu lee yahay ugu yeraan 3 sano oo khibrad shaqo ah oo la xiriirta howlaha maamulka, maaliyadda iyo xisaabaadka.
 Inuu leeyahay 5 sano oo khibro ah haddii heerkiisa/heerkeeda jaamacadeed yahay darjada 1aad Bach. Degree, takhasusaadka kor ku xusan.
 Inuu lee yahay aqoon uu si fiican ugu adeegsan karo aaladda Komputerka
3- AGAASIMAHA WAAXDA MAAMULKA, MAALIYADD IYO SAHAQAALAHA:-
 Inuu Soomaali yahay, dhimirkiisu dhan yahay, aan danbe maxkamad xukuntey galin isla markaana da’diisa ka yareyn 25 sano
 Ugu yeraan shahaada 2aad ee jaamacada (master degree) oo la xiriirta maamulka iyo maareynta, maaliyadda, xisaabaadka ama wax u dhigma.
 Inuu ku hadli karo islamarkaana qori karo luuqadaha Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiiriska
4- AGAASIMAHA WAAXDA QORSHAYNT SAXAAFADDA IYO TIKNOLOJIYADDA (ICT):-
 Ugu yeraan shahaada 2aad ee jaamacada (master degree) oo la xiriirta maamulka iyo maareynta, saxaafada, IT ama wax u dhigma.
 Inuu lee yahay ugu yeraan 3 sano oo khibrad shaqo ah oo la xiriirta howlaha maamulka, Saxaafada, IT ama wax u dhigma.
5- AGAASIMAHA WAAXDA SHARCIYADA IYO KAYDKA:-
 Heerka aqoonta: Master dgreee in law, political science or public administration
 Heerka khibradda shaqo:
o Ugu yaraan saddex sano (3 years) oo kihibrad ah ama wax u dhigma haddii uu haysto Master degree.
o Ugu yaraan shan sano (5 years) haddii uu haysto shahaadada jaamacadda darjajada 1aad Bach. ( law, political science or public administration)
o ee 1aayeraan shahaada 2aad ee jaamacada (master degree) oo la xiriirta Sharciga ama wax dhigma.
 Inuu lee yahay ugu yeraan 3 sano oo khibrad shaqo ah oo la xiriirta howlaha Sharciga ama wax u dhigma.
6- AGAASIMAHA WAAXDA XIRIIRKA DAWLAD GOBOLEEDYADA:-
 Ugu yeraan shahaada 2aad ee jaamacada (master degree) oo la xiriirta maamulka iyo maareynta, maaliyadda, xisaabaadka ama wax u dhigma, sida; Political science, Law, Public administration, MBA iyo International relations.
 Inuu aqaano fiican luu leeyahay, taariikhda iyo juquraafiga Somaliya.
 Inuu si aqaanu ku dheehan tahay ula socoda arrimaha iyo xaaladda guud ee siyaasadda Somalia.
Sida Loo soo codsanayo
Dadka daneynaya waxay ku soo codsan karaan qaab online ah oo keliya. Waxaa lala soo xiriirayaa oo keliya dadka ku soo baxa liiska gaaban. Fadlan ku soo dir codsigaaga, Taariikh nololeedkaaga iyo nuqul shahaadooyinkaaga ka mid ah emailkan: senatesom@gmail.com . Fadlan cinwaanka codsigaaga ka dhig jagada aad soo codsanayso iyo numberka tixraaceeda. Gabdhaha leh takhasuska iyo khibrada loo baahan yahay waxaa lagu boorinayaa inay soo codsadaan ugu danbeyn codsigaaga soo dir 24April 2017 4:00pm.